रहरको दा’ल र च’ना निकै गुण’कारी, यसको फाइदा जानेर अचम्मि’त पर्नु हुने’छ
कुलमान घिसिङ प्रदर्शनबारे बोले
काठमाडौंका ५ सय कोराना संक्रमित सम्पर्कविहीन
आज नेपाल आइपुग्दै सरकारले खरिद गरेको रेल सेट…
यो समाचार ‘अनलाइनखबर’ले किन सुटुक्क डिलिट गर्‍यो ? यस्तो थियो समाचार
अ’क्सफोर्ड वि’श्वविद्यालयको दावी : कोरो’नावि’रुद्धको खोप’को कुनै सा’इड इ’फेक्ट छैन
विश्वमा ३० करोड मानिस भोकै रहेकाे भन्दै सहयोग गर्न डब्लुएफपीको आग्रह
यस चिनियाँ डाक्टरले कोरोनाभाइरस भित्र भएका सबै गोप्य कुरा खोलिन
लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खुल्ने असोज ५ गतेदेखि
झन् बढ्यो प्याजको भाउ, किलोकै २४० सम्म पुग्यो
कुलमानको पुनःनियुक्तिबारे कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले पन्छाए
बार अनुसार मात्र पसल खोल्न पाइने काठमाडौं उपत्यकामा , हेर्नुहोस् कुन बार खुल्ने
लकडाउनपछिको ५ महिनामै एनसेलले गुमायो १४ लाखभन्दा बढी ग्राहक
रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि नेपालको अनुमति खोज्दै भारत
शुरु हुँदैछ आईपीएल आजबाट, सन्दीप आबद्ध दिल्लीको पहिलो खेल भोलि
मेसीले आफ्नो नाम ट्रेडमार्कको रुपमा दर्ता गराउने लडाइँ ९ वर्षपछि जिते
नेइमार अनुपस्थित खेलमा पीएसजीको संघर्षपूर्ण जित
इङ्गल्याण्ड–अष्ट्रेलिया निर्णायक एक दिवसीय आज
ब्यालेन्स रिचार्ज, ट्रान्सफर र चेक गर्न अब सबै सेवा प्रदायकको एउटै सर्ट कोड
कुलमान बन्ने कि ‘कुल म्यान’ ?
लकडाउनमा विश्वभर घट्यो इन्टरनेट स्पीड, नेपाल २५ औं स्थानमा
टिकटकसँगै पब्जीपनि देशभरी प्रतिबन्ध
कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थी यसकारण पर्दैछन् अन्योलमा
४० अङ्कको लागि कक्षा १२ को परिक्षा अब Online बाट । पुरा पढ्नुहोस्
महामारीमा अभिभावक शिक्षा
Breaking News: कक्षा १२ को परीक्षा सम्बन्धि यस्तो छ ताजा अपडेट
लुम्बिनी विश्वविद्यालयले सुरु गर्‍यो स्नातक र स्नातकोत्तरको परीक्षा
यसो भन्छ डब्ल्यूएचओ ! कुन उमेरका मानिसलाई कोरोनाको खतरा कम ?
नेपालमा चिनियाँ, रुसी र अन्य खोप निर्माताको चासो तर परीक्षण गरिएको छैन
ल्वाङको औषधीय गुण, टाउको दुखेकोदेखि पेटमा ग्यास भरिँदाको लागि अचुक औषधि
बच्चाहरूले खाएनन् खाना ? यो विधि अपनाउनुस् !
२४ घण्टामा देशभर हालसम्मकै बढी २ हजार २० जना कोरोना संक्रमित थपिए
नखानुहोस् यस्ता चिज शनिबारको दिन झुक्किएर पनि, नत्र रिसाउनेछन् शनिदेव !
यस्ता छन् सजिलै घरमै बसी गोरो बन्ने उपाय
ईमानदार र असल पाए विवाह गर्न चाहन्छु…
भुलेर पनि नखानुस् अनार यी ७ व्यक्तिले :
एउटै विवाह गाेत्रभित्र किन चल्दैन ? यस्ताे छ धार्मीक मान्यता
सुपुष्पाको पलसँग फिल्म गर्ने इच्छा
अनमोल, प्रदिप र पलको फिल्मी लाइनअप
सुशान्तको फार्म हाउसमा भेटियो यति ठुलो प्रमाण….
कंगनाको अफिसमा महानगरको डोजर
विबाह अघि नै यि पुरुषको प्रेममा थिइन् नायिका स्वस्तिमा खड्का
दालमा रहर उत्तम मानिन्छ । दिनहुँ उपयोग गरिने रहर दाल रा’तो र सेतो गरी दुई प्रकारको हुन्छ । रहर दालमा खनिज, का’र्बोहाइड्रेट, आइरन, क्याल्सियम आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: दालमा रहर उत्तम मानिन्छ । दिनहुँ उपयोग गरिने रहर दाल रा’तो र सेतो गरी दुई प्रकारको हुन्छ । रहर दालमा खनिज, का’र्बोहाइड्रेट, आइरन, क्याल्सियम आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा २२ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । रहरको दाल बा’थ, पि’त्त र क’फ अर्थात् त्रिदोषनाशक हुने भएकोले सबैका लागि अनुकूल मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार रहर रुखो, शीतल, हल्का, बा’थकारक, क’फ–पि’त्त र र’गतको दोषलाई समाप्त पार्ने हुन्छ । पच्न सजिलो र शौच रो’क्ने गुणसमेत हुन्छ । यो वायु उत्पादक हुन्छ । यसले शारीरिक अं’गलाई सुन्दर बनाउँछ ।
रहर र’गत, क’फ र र’गतसम्बन्धी विकार हटाउन उपयोगी मानिन्छ । रा’तो रहर हल्का, तीक्ष्ण र न्यानो मानिन्छ । यसले भोकसमेत बढाउँछ । रहरले क’फ, विष, र’गतको खराबी, लु’तो, कु’ष्ठ र पे’टमा भएको कीरा हटाउँछ । यो दाल पाचकसमेत हो । धेरै सजिलै पच्ने भएकोले यो दाल बि’रामीलाई समेत दिइन्छ । पा’इल्स, ज्व’रोमा यो दालको उपयोग लाभकारी मानिन्छ ।
अर्कातिर, चना शरीरमा तागत उत्पन्न गर्ने, भोजनमा रुचि पैदा गर्ने मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार यो न्यानो प्रकृतिको हुन्छ । चनाले शरीरलाइ तरोताजा राख्ने गर्छ । र’गतमा जोस उत्पन्न गर्छ । यो क’लेजोका लागि समेत लाभदायक मानिन्छ । यसले र’गत सफा गर्छ, धातु बढाउँछ र आवाज सफा पार्छ । र’गतसम्बन्धी विकार हटाउन लाभदायक मानिन्छ । यसले पि’साब खोल्छ ।
चना मुख्यत: कि’शोर र शा’रीरिक मिहिनेत गर्नेहरूका लागि पौष्टिक खाजा हो । चना भिजाएर वा अंकुरित गरी नियमित बिहान सेवनले शरीर स्फूर्तिवान् र शक्तिशाली हुन्छ । अंकुरित चना खानुका धेरै फाइदा छन् । अंकुरित चनाले धातुलाई पुष्ट, मां’सपेशीलाई सुदृढ र शरीरलाई बज्रजस्तै कठोर बनाउने प्राचीन मान्यता छ । यसको सेवन छालाको रोगमा समेत लाभदायक मानिन्छ । अंकुरित चनाको सेवनले फो’क्सो बलियो बनाउने मान्यतासमेत छ । क’ब्जियतको समस्या भएकाहरूको लागि अंकुरित चना राम्रो मानिन्छ ।
भि’टामिन ‘सी’ को मात्रा बढी हुने भएकाले चनाले तौल बढाउँछ । यसले र’गत वृद्घि गर्नुका साथै सफासमेत गर्छ । र’गतमा को’लेस्ट्रोलको मात्रा कम गरेर मुटुको रोग हटाउनसमेत चना सहयोगी मानिन्छ । बालबालिकालाई महँगो बदामको सट्टा कालो चना खुवाउनाले उनीहरू स्वस्थ हुन्छन् ।
तरकारी र दालका रुपमा मात्रै नभइ यस्ता तरिका छन् चना खानुका:
चनालाई हामीले तरकारी बनाएर पनि खान सक्छौ भने यसको दाल पनि खान सकिन्छ । यसलाई हामीले भुटेर पनि खान सक्छौ । चना नेपाली खानपिनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यसमा का’र्बोहाइड्रेट, फा’इबर, क्लाल्सियम, आइरन र भिटामिनको राम्रो स्रोत हो । जसले हामीलाई स्वा’स्थ्य राख्नमा मद्दत गर्छ । यी सबै विशेषताका कारण नै यसलाई गरिबको मेवा भनिन्छ ।
नियमित भिजाएको चना खानाले कमजोरी कम हुनुका साथै यसका अन्य फाइदा पनि छन् । चना हामी सबैले सुनेको र आफ्नो आहारमा प्रयोग गर्ने एक गेडागुडी हो । जसको सेवन अनेक तरिकाले गर्न सकिन्छ । तरकारी बनाएर, सातुको रुपमा, पानीमा भिजाएर काँचै खान सकिन्छ चना ।
चनाको दाल खादाका फाईदा यस्तो छ:
– चनाको दाल सेवन गर्नाले क’ब्जीयतको समस्या निर्मूल हुन्छ । यती मात्रै होइन जन्डिसका रो’गीलाई पनि चनाको दालको सेवन धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
– चनाको दालले को’लेस्ट्रोललाई कम गरेर तौल कम गर्न धेरै मद्धत गर्छ । यो पा’चन प्रणालीको लागि धेरै नै लाभदायक छ ।
– चनाको दाल जिंक, क्याल्सियम, प्रोटिन, फोलेट आदिले भरपुर हुन्छ जसले तपाईको श’रिरलाई आवश्यक र जरुरी उर्जा प्रदान गर्छ । यसको अलावा यो पे’टको समस्याको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
– चनाको दालले शरिरमा आ’इरनको कमीलाई पुरा गर्छ र हे’मोग्लोबिनको स्तर बढाउन मद्धत गर्छ । यसमा अमिनो एसिड शरिरको कोषहरुलाई मजबुत गर्नमा मद्धत गर्छ ।
– डा’यबिटिज नियन्त्रणको लागी चनाको दालको सेवन धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । यसले ग्लुकोजको अत्याधिक मात्रालाई सोस्नपनि धेरै नै मद्धत गर्छ । सौन्दर्य बढाउनको लागि चनाको दालको बेसन अनुहारमा लगाउनाले लाभदायक हुन्छ ।
भिजाएको चना खानुका ८ फाइदा
१. स्वा’स्थ मु’टु:
चनाले काेलेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राख्छ । जसले गर्दा मु’टु स्व’स्थ रहन्छ र मु’टु सम्बन्धी रो’ग लाग्ने खतरा पनि कम रहन्छ । चनाको नियमित सेवनले मु’टुको धमनीहरुलाई खुलाउन र र’गतको मात्रालाई बढाउनमा पनि मद्दत गर्छ । चनामा पाइने अल्फा लिनोलनिक ए’सिड र ओमेगा ३ आपसमा मिलेर कोरिनरी मु’टु सम्बन्धी रो’ग र कार्डियो भास्कुर सम्बन्धी खतरालाई कम गर्छ ।
२. क’ब्जीयतमा राहत:
भिजाएको चनामा पर्याप्त मात्रामा फाइबर हुन्छ । यसले पे’टलाई सफा राख्नुका साथै पा’चन तन्त्रलाई पनि राम्रो बनाउँछ ।
३. पि’साबको समस्या:
भिजाएको चनामा गुड़ मिसाएर खानाले पटक–पटक पि’साब लाग्ने समस्यामा राहत हुन्छ । भिजाएको चना खानाले पा’इल्सको समस्यामा पनि आराम दिलाउँछ ।
४. स्वस्थ छाला:
भिजाएको चनामा नुन नहाली सादा चना चबाएर खानाले छाला स्वस्थ हुनुका साथै चम्किलो हुन्छ । साथै, छाला चिलाउने समस्या छ भने त्यसमा पनि राहत दिलाउँछ ।
५. तौल बढाउँछ:
यदि तपाई चाहिने भन्दा बढी दुब्लो हुनुहुन्छ भने भिजाएको चना खानुस् । चनाले शरिरको तौल बढाउने काम पनि गर्छ । नियमित चना खानाले तौल बढ्नुका साथै मां’सपेशी पनि बलियो बनाउँछ ।
६. सर्दीमा राहत:
चनाले शरीरको रो’ग प्रतिरोध क्षमतालाई बढाउँछ । जसले रु’घाखोकी, सर्दी जस्ता समस्यामा राहत दिलाउँने काम पनि गर्छ ।
७. र’गतको मात्रा पुरा:
चना फलामको धेरै नै राम्रो स्रोत हो । यसले शरीरमा र’गतको कमी छ भने त्यसलाई हटाउँछ । साथै र’गतलाई सफा पनि गर्ने काम गर्छ ।
पुर्ण फाइदाका लागि कसरी खाने चना ?
एक मुट्ठी चना लिने तर त्यसलाई माटोको भाँडोमा सफा पानीमा राखेर रातभर भिज्न दिने । रात भर (करीब ९ घन्टा) चनालाई त्यस पानीमा भिज्न दिने । बिहान चनालाई पानीबाट निकालेर राम्रोसँग चबाएर खाने । त्यसपछि पानी पिउने । यसरी नियमित चना खानाले तपाईँ सँधै स्वस्थ रहनु हुन्छ ।
दैनिक भुटेको चना खाँदा शरिरलाई विभिन्न प्रकारका फाइदा हुन्छ:
तरकारीका रुपमा र भिजाएको चना खाँदाका फाइदाबारेमा हामीले थाहा पायौँ । तर यसका अतिरिक्त चनालाई भुटेर खाएमा पनि यसको पौष्टिक गुणलाई थप उपयोगी बनाउँन सकिन्छ । भुटेको चना दैनिकरुपमा खाएमा हुने फाइदाहरु यस्ता छन् :
1. मोटोपना घटाउँछ चना:
यदि तपाईं मोटोपनाका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ भने भुटेको चना तपाईंका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । भुटेको चनामा क्यालोरीको मात्रा निकै कम हुन्छ जबकी यसमा विभिन्न पौष्टिक तत्व जस्तै पो’टासियम, क्या’ल्सियम, आ’इरन, का’र्बोहाइड्रेट, प्रो’टिन, डा’इट्री फा’इबर भरपुर मात्रामा हुन्छ । सय ग्राम भुटेको चनामा १ सय ६४ क्यालोरी हुन्छ । यदि तपाईं खाजामा भुटेको चना खानुहुन्छ भने तपाईंको तौल निकै चाँडै घट्छ ।
तौल घटाउनका लागि कसरी खाने ?
तौल घटाउनका लागि चनाको प्रयोग निकै सजिलो छ । चनालाई एक घण्टाका लागि पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् र यो सुकेपछि यसलाई बालुवा र नुनमा राखेर भुट्नुहोस् । तपाईंले बजारबाट भुटेको चना पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ । तपाईं चाहेको खण्डमा भुटेको चनामा सलाद जस्तै प्याज, गोलभेडा, गाजर, मुला, कागतीको रस आदि मिसाएर खानसक्नुहुन्छ ।
2. चनाले र’गत बढाउँछ:
चनामा आइरनको भरपुर मात्रा हुन्छ । त्यसकारण यदि तपाईंलाई र’क्तअल्पत्ताको समस्या छ भने दैनिक भुटेको चना खान सुरु गर्नुहोस् । ध्यान दिनुहोस्, बोक्रा नभएको चनामा बोक्रा भएजत्तिको फाइदा हुँदैन । रक्तअल्पत्ताको शिकार धेरैजसो महिला हुने भएकाले यसले महिलालाई निकै फाइदा गर्छ ।
3. दिनभरी क्रियाशील रहनुहुनेछ:
हामी सक्रिय रहनका लागि ऊर्जाको अत्यधिक आवश्यक पर्छ । यस्तोमा चनाले निकै सहयोग पुर्याउँछ । चना खाँदा ऊर्जा पाइन्छ । मधुमेह रोगीका लागि पनि चनाको सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
4. डाइट्री फाइबरले भरिपूर्ण:
फाइबर हाम्रो शरिरका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । चना फाइबरले भरपुर हुन्छ त्यसकारण यसले पाचन क्रियालाई सुधार्छ । भुटेको चना खाँदा कब्जियतको समस्यामा फाइदा पुर्याउँछ ।
आज २०७७ असोज ३ गते शनिबारको राशिफल
नेपाल22 mins ago
खेलकुद2 hours ago
रोचक2 hours ago
राशिफल3 hours ago
कोरोना भाइरस18 hours ago
निलो दाग बोक्सीले रगत चुस्दा भएको होईन सबैले जन्नै पर्ने | नत्र अकाल मै ज्यानजान सक्छ
शिक्षा2 weeks ago
अन्ततः कोरोनाले रोकिएको पढाइ शुरु गर्ने मिति नै तोकियो
नेपाल5 days ago
एकासी ह्वात्तै घट्यो सोच्नै नसक्ने गरि खाना पकाउने ग्यासको भाउ : हेर्नुहोस
तपाईलाई ग्यास्ट्रिक छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यी खानेकुरा
भुलेर पनि नखानुस् भटमास यस्ता व्यक्तिले, हुनसक्छ नसोचेको असर
कोरोना भाइरस1 month ago
खुशीको खबर नेपालमा पनि आयो कोरोनाको औषधी भर्खरै
नेपाल1 month ago
विद्यालय सञ्चालन बारे निर्णय, तोकियो संचालन हुने मिति
राशिफल3 months ago
श्रावन ११ गते २०७७ वि.स. आइतवारको राशिफल दर्शन स्वरुप एक सेयर हेर्नुहोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय1 month ago
रुसी कोरोना खोप : ३८ जनामा गरिएको थियो टेस्ट, यस्ता छन् साइड इफेक्ट!
Copyright © 2007 - 2020 | All Rights Reserved By Nepal Online Patrika